Ixabiso le-samsung galaxy z elingavulwanga lihla ngezantsi kwe- $ 1,000 kwi-amazon
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Ixabiso elingavulwanga le-Samsung Galaxy Z Flip yehla ngezantsi kwe- $ 1,000 kwiAmazon
Isamsung yenye yeenkampani zokuqala ze-smartphone ukuveza ubume bayo ngo-2021 Galaxy S21 ilungile nje kwasekoneni , kodwa ukuba awucwangcisi ukuthenga enye kwaye wena & apos; siphinde sibe ngakumbi kwizinto 'ezizodwa', sinesivumelwano esifanelekileyo kuwe.
I-Galaxy Z Flip, i-Samsung kunye ne-apos; i-smartphone esongekayo, ethi ixabise imali eninzi, ngoku iyathengiswa eAmazon engaphantsi kwe- $ 1,000. Ukujonga iifowuni kunye neapos ezicetyisiweyo zexabiso lokuthengisa elimalunga ne- $ 1,380, asitsho ukuba le yinto elungileyo.
Kwakhona, njengoko isihloko sisitsho, esi sisixhobo esingatshixwanga esenzelwe ngokukodwa imakethi yase-US, oko kuthetha ukuba iyakusebenza nazo zonke izinto eziphambili kwilizwe. Esi sivumelwano sivela ngqo kwi-Samsung Electronics, ke awuzuphumelela kwaye akufuneki ukhathazeke malunga newaranti.
Ifowuni evuliwe iselfowuni: Inguqulelo yase-US-iSIM enye: I-256GB yoGcino: Ukusonga iTekhnoloji yeGlasi: Ibhetri ehlala ihleli: Isibuko esimnyama
$ 408 isaphulelo (30%) Thenga kwiAmazon
Ukuphinda uphinde kwakhona, iGlass Z Flip inyathela ngamandla IQualcomm Snapdragon 855+ iprosesa, edityaniswa ne-8GB ye-RAM kunye nememori yangaphakathi ye-256GB. Kwakhona inika umboniso we-6.7-intshi Infinity Flex (Super AMOLED), ikhamera enye ye-10-megapixel, kunye nebhetri ye-3,300 mAh.
Ukuba uyawucinga kwakhona isivumelwano, qiniseka ukuba ukhetha iMirror Black version ye-smartphone, njengoko eminye imibala ingasafumaneki ukuthengwa okwangoku.
Windows 10 vs Windows 8.1: Utshintsho ukuza kuthi ga ngoku kwimifanekiso
I-ZTE & apos; ukungcola kwe-smartphone entsha nexabiso eliphantsi kuza nebhetri esusekayo kunye ne-Android 10
Ukuba ujonge ukutshintsha ukusuka kwiVerizon ukuya kwi-T-Mobile, unokufuna ukungxama
I-iPhone 11 Pro Max vs Galaxy Qaphela i-10 +
Uguqula njani imephu yeJava iye kwiJSON